ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို အာဂျင်တီးနားအသင်း ပထမဆုံး ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၈ ပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၁)
20 Jun 2018 . 1:52 AM
တောင်အမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၇)နိုင်ငံအထိ ခြေစစ်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၄ ပြိုင်ပွဲ ပုံစံအတိုင်း အုပ်စုအဆင့်ကို (၂)ဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို အုပ်စုအဆင့် (၂)ဆင့်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပြီး အုပ်စုဒုတိယအဆင့်မှာ အုပ်စု ပထမနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းတို့ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ အုပ်စုဒုတိယနေရာကို ရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ အီတလီအသင်းတို့ကတော့ တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့ရပြီး ဘရာဇီးလ်အသင်းက တတိယနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင် အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းတို့ ပွဲစဉ်မှာ မိနစ် (၉၀)အတွင်း (၁-၁)ဂိုးစီ သရေကျနေခဲ့လို့ အချိန်ပို ဆက်ကစားခဲ့ရပြီး အချိန်ပိုအရောက်မှာတော့ အာဂျင်တီးနားအသင်းက အနိုင်ဂိုး (၂)ဂိုး ထပ်မံသွင်းယူကာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဆုဖလားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နယ်သာလန်အသင်းကတော့ ဗိုလ်လုပွဲ (၂)ကြိမ်ဆက် တက်ရောက်နိုင်ပေမယ့် အိမ်ရှင်အသင်းတွေကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ဒုတိယနေရာနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့သလို အသန့်ရှင်းဆုံးအသင်းဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၂)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၇၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Host Country – Argentina
Dates – 1–25 June (25 days)
Venue(s) –6(in5host cities)
Champions – Argentina (1st title)
Fourth Place – Italy
Goals Scored – 102 (2.68 per match)
Attendance – 1,545,791 (40,679 per match)
Top Scorer(s) – Mario Kempes – Argentina (6 goals)
Best Young Player – Antonio Cabrini (Italy)
Photo:The Movie Database, Wall Street Journal, Liverpool Echo
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၁)
တောငျအမရေိကတိုကျမှာရှိတဲ့ အာဂငျြတီးနားနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး နိုငျငံပေါငျး (၁၀၇)နိုငျငံအထိ ခွစေဈပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈခဲ့တယျ။ ၁၉၇၄ ပွိုငျပှဲ ပုံစံအတိုငျး အုပျစုအဆငျ့ကို (၂)ဆငျ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ရပါတယျ။ ပွိုငျပှဲကို အုပျစုအဆငျ့ (၂)ဆငျ့နဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ရပွီး အုပျစုဒုတိယအဆငျ့မှာ အုပျစု ပထမနရောကို ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ အာဂငျြတီးနားနဲ့ နယျသာလနျအသငျးတို့ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ရပါတယျ။ အုပျစုဒုတိယနရောကို ရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ အီတလီအသငျးတို့ကတော့ တတိယနရောလုပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့ရပွီး ဘရာဇီးလျအသငျးက တတိယနရောကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ အိမျရှငျ အာဂငျြတီးနားအသငျးနဲ့ နယျသာလနျအသငျးတို့ ပှဲစဉျမှာ မိနဈ (၉၀)အတှငျး (၁-၁)ဂိုးစီ သရကေနြခေဲ့လို့ အခြိနျပို ဆကျကစားခဲ့ရပွီး အခြိနျပိုအရောကျမှာတော့ အာဂငျြတီးနားအသငျးက အနိုငျဂိုး (၂)ဂိုး ထပျမံသှငျးယူကာ (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရပွီး ခနျြပီယံဆုဖလားကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နယျသာလနျအသငျးကတော့ ဗိုလျလုပှဲ (၂)ကွိမျဆကျ တကျရောကျနိုငျပမေယျ့ အိမျရှငျအသငျးတှကေို ရှုံးနိမျ့ပွီး ဒုတိယနရောနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ အာဂငျြတီးနားအသငျးဟာ ခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျခဲ့သလို အသနျ့ရှငျးဆုံးအသငျးဆုကိုလညျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၂)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၇၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး